आईपीएलः पञ्जाब र राजस्थानको भिडन्त आज
scheduleआइतवार श्रावण ५ गते, २०७६
नयाँ दिल्ली, ३ वैशाख । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट प्रतियोगितामा आज किंग्स इलेभन पञ्जाव र राजस्थान रोयल्सबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । यो यस सिजनको ३२ औं खेल हो ।
रविचन्द्र आश्विनको कप्तानीमा रहेको पञ्जाव र अजिन्क्या रहाणेको कप्तानीमा रहेको राजस्थानबीचको आजको खेल चण्डिगढ स्थित मैदानमा राति सवा ८ बजेबाट सुरु हुनेछ । यो सिजनमा उनीहरुको आज दोस्रो खेल हो । यसअघि भएको खेलमा पञ्जाबले राजस्थानलाई १४ रनले हराएको थियो । ७ खेल खेलेको राजस्थानले २ खेलमा जित हात पार्दै ४ अङ्क जोडेको छ । ८ खेल खेलेको पञ्जावले ४ खेलमा जित हात पार्दै ८ अङ्क जोडेको छ ।
आज खेल हुन लागेको मोहाली रंगशालामा राजस्थानले ६ वर्षदेखि जित निकाल्न सकेको छैन ।
को को छन् टिममा ?
राजस्थान रोयल्स : अंजिक्य रहाणे (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), स्टीव स्मिथ, सञ्जु सैमसन, बेन स्टोक्स, कृष्णप्पा गौतम, जोफ्रा आर्चर, श्रेयस गोपाल, जयदेव उनादकट, धवल कुलकर्णी, वरुण अरोन, मनन वोहरा, आर्यमन बिड़ला, शशांक सिंह, लियाम लिविंगस्टोन, रियान पराग, स्टुअर्ट बिन्नी, शुभमन रंजाने, महिपाल लोमरोर, प्रशान्त चोपडा, ईश सोढी, ओशाने थोमस, सुधीसन मिथुन ।
किंग्स इलेवन पंजाब : रविचंद्रन अश्विन (कप्तान), क्रिस गेल, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, करुण नायर, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), मनदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, मुजीब उर रहमान, एंड्रयू टॉय, अंकित राजपूत, डेविल मिलर, सरफराज खान, मोएसेस हेनरिक्स, हरप्रीत बरार, सैम कुरन, सिमरन सिंह, मुरुगन अश्विन, मोहम्मद शमी, हार्डुस विलजोएन, अर्शदीप सिंह, दर्शन नलकांडे, अग्निवेश अयाची ।
मैत्रीपूर्ण खेलमा पीएसजी रोकियो
धोनी वेस्ट इन्डिजविरुद्धको सिरिजमा सहभागी नहुने
अल्जेरियाले उचाल्यो अफ्रिकन कपको उपाधि
अफ्रिकन च्याम्पियन बन्न सेनेगल र अल्जेरिया भिड्दै, सबैको ध्यान माने र महारेजमाथि
म्याथिस डी लीट युभेन्टसमा अनुबन्धित
‘लाम्पर्डले फ्यानहरुको समर्थन ६ महिनासम्म पाउँनेछन्’
‘बार्सिलोना बल्ल बलियो टोली बन्यो’
विश्वकप छनोट : नेपालले खेल्ने ३ वटा खेल दशरथ रंगशालामा हुने
वेस्टहम युनाइटेडले इतिहास रच्दै सेबास्टियन हालेयरलाई किन्यो
सानदार कमव्याक गर्दै म्यानचेस्टर सिटीले वेस्टहमलाई हरायो
नेयमारलाई म्यानचेस्टर युनाइटेडले किन्न सक्ने
टोटनहमका केइरियन ट्रिपर एट्लेटिको मड्रिड गए
विश्वकप छनोटको दोस्रो चरण : नेपाल कठिन समूहमा
मगुइरी म्यानचेस्टर युनाइटेका लागि महँगो भए
पोग्वालाई नयाँ च्यालेन्जका साथ क्लबमा राख्ने
‘४२ मिलियन युरो देउ, जेम्स रोद्रिगेज लैजाउँ’
‘पिएसजी र नेयमारबीचको कुरा हो’
‘बार्सिलोना छोड्न परे लिभरपुलबाहेक अरु क्लबमा जाँदिन’
एट्लेटिको मड्रिडले आक्रामक खेल खेलाउने
जिदानको योजनामा छैनन् बेल
पिएसजी फर्किए नेयमार
च्याउ खोज्दा खोज्दै जंगलमा हराएका १० युवा फेला परे
नवलपरासी, ४ साउन । शुक्रबार च्याउ टिप्न भनेर रूपौलिया जंगल छिरेका १० जना किशोरहरू २४ घण्टापछि शनिबार फेला परेका छन् । शनिबार...
दिल्लीकी पूर्व मुख्यमन्त्री दीक्षितको निधन
एजेन्सी, ४ साउन । दिल्लीकी पूर्व मुख्यमन्त्री शीला दीक्षितको निधन भएको छ । ८१ वर्षको उमेरमा शनिबार अस्पतालमा उपचारको क्रममा...
विप्लव कार्यकर्ताद्वारा वडा कार्यालय तोडफोड
दैलेख, ४ साउन । विप्लव समूहका कार्यकर्ताले दैलेखको आठवीस नगरपालिका १ को वडा कार्यालय तोडफोड गरेका छन् । विप्लवका कार्यकर्ताले...
पाल्पाको रानीमहलको जग्गा व्यक्तिका नाममा
शरद शर्मा/पाल्पा, ४ साउन । पाल्पास्थित ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक रानीमहलको सरकारी जग्गा मोहीका नाममा दर्ता गराएको पाइएको...
फेरि भारी वर्षा !
काठमाडौँ, ५ साउन । पर्दै–रोकिँदै गरेको मनसुनी वर्षाले फेरि सक्रिय हुने छाँट देखाएको मौसमविद्हरू बताउँछन् । असार २६, २७ र २८...
प्रलोभन देखाइ बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा ६५ वर्षीय वृद्ध पक्राउ
ओखलढुंगा, ४ साउन । प्रलोभन देखाइ बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा ओखलढुङ्गामा एक वृद्ध पक्राउ परेका छन् । स्थानीय १० वर्षीया...
जुवाको खालबाट १६ जना पक्राउ
भक्तपुर, ४ साउन । भक्तपुरमा जुवाको खालबाट १६ जना जुवाडे पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले जुवावातास खेलिरहेको बेला भक्तपुरका दुई...
एजेन्सी, ४ साउन । भारतीय क्रिकेटर महेन्द्र सिंह धोनीले वेस्ट इन्डिजविरुद्धको सिरिज नखेल्ने बताएका छन् । आइतबार वेस्ट इन्डिजविरुद्ध...